အိုဇုနျး disinfector GSJ001
OZONE DISINFECTOR GSJ001 Model No. GSJ001 Capacity 10L Rated Voltage 220V Rated Power 8W Frequency 50Hz Working Modes3Modes Color Options Green, Red Production Size 330*270*310mm Loading QTY 1548pcs/40HQ Delivery & Service Timely delivery each time. ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးပြီးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီနှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး စီအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်. Our…
OZONE DISINFECTOR GSJ003 Model No. GSJ003 Capacity 6L Rated Voltage 220V Rated Power 8W Frequency 50Hz Working Modes7Modes Color Options White Production Size 315*315*345mm Loading QTY 1650pcs/40HQ Delivery & Service Timely delivery each time. ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးပြီးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီနှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး စီအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်. Our…